Forlan (Urugway ) vs Messi ( Arjantiin ) oo Xaalku Ku wada Xun yahay, lagana doonayo.. – SBC
Forlan (Urugway ) vs Messi ( Arjantiin ) oo Xaalku Ku wada Xun yahay, lagana doonayo..
Waxaa meel xasaasi ah maraya tartanka kubada cagta ee Copa America iyaodo wadamada badan ay xaaladu ku xun tahay sida Argentina & Urugway oo laga doonayo kulamada u dhiman inay badiyaan oo kaliya.
Forlan (Urugway ) vs Messi ( Arjantiin ) oo Xaalku Ku wada Xun yahay, lagana doonayo badis kulimada u dhiman
Kulamadii ugu Dambeeyay Koobka Laatiin Ameerika 2011 sida tan ayey u dhaceen.
Arjantiin vs kolombiya……………………..0-0
Costa Rica vs Bolivia……………………….2-0
Gruub A waxa ay u kala horeeyaan sidatan
Kolombiya……………………… 2 ciyaar 4 dhibic
Costa Rica………………………..2 ciyaar 3 dhibic
Arjantiin…………………………. 2 ciyaar 2 dhibic
Bolivia……………………………..2 ciyaar 1 dhibic
Waxa ay u ciyaari doonaan kulamada isagu harsan sidatan
Arjantiin vs Costa Rica
Waxaa Banaanka taagan ilaa hada Colombia oo leh 4 dhibic.waxaa rajadeedu ay laalantay Bolivia oo leh 1 dhibic,waxaa Kulan kala bax oo kale ah wada ciyaari doona Costa rica vs Arajantiin Ciyaartaan Xulka Arjantiin Barbardhac waa ku haraa,waxaa kaliya oo uu ku soo bixi karaa Badis.
N.B.Waa laga yaabaa in Arjantiin hadii ay harto ay ka mid noqoto 2 xul ee lagu soo biirinayo 6 xul ee u soo baxaya Wareega 2aad.
Chile vs Uruguay…………………….. 1-1
Peru vs Mexico…………………………1-0
Waxaa ka haray Guruubkaan Xulka Mexico oo wax dhibic ah aan laheyn,xulalka Chile & Peru ayaa min 4 dhibic ku hogaaminaya rajadooduna ay wanaagsan tahay waxaana isagu harsan Kulan,oo kii badiya uu soo bixi doono,balse hadii Urugway ay ka badiso Mexico kii laga badiyo Chile iyo Peru ayaa haraya maadaama urugway ay yelaneyso 5 dhibic hadiise Urugway ay ciyaarta ku dhameysato barbardhac sida bay ku hartay xitaa hadii ay kala badiyaan Chile iyo Peru.
N.B sida Arjantiin oo kale hadii ay harto Urugwaay waa dhici kartaa in lagu soo biiriyo 6 wadan ee u soo talaabaya Wareeega labaad iyada iyo arjantiin hadii ay haraan lagu buuxinayo 8 xul oo ka qeybgali doona Wareega 2aad.
Hadaba Xaalka rajada Laacibka ugu Wanaagsan Caalamka iyo Xidigii ku guuleystay Ciyaaryahankii ugu Wanaagsanaa Koobka Aduunka 2010 Messi iyo Forlan Xaalkoodu Halkaa ayuu marayaa waxaana labadii kulan oo ay ciyaareen Xulalkooda arjantiin iyo urugway ay keensadeen min 2 dhibcood ka dib markii ay labadii kulan oo ay yeesjeen ay barbardhac ku dhamesyteen.
Guruubkaan waxba la isma dheera waxaana la wada leeyahay min 1 dhibic balse waxaa la sugayaa kulmada dhici doona Caawa oo ay isagu aadan yihiin Xulalku sidatan.